नेपालगञ्जमा एकीकृत फनपार्क रिसोर्ट सञ्चालन – Rajmarg Online
नेपालगञ्ज, ४ कात्तिक। नेपालगञ्जमा एकीकृत रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ । नेपालगञ्ज वडा नम्बर १४ बालेगाउँस्थित साढे ३ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको मेरो प्लोनटभित्र चारवटा सेवासँगै रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको हो ।
रिसोर्टको चारैतिर हरियालीले ढाकिएको र विभिन्न कलाकृतिले सजाएर सौन्दर्यकरण गरिएको सञ्चालक पशुपतिदयाल मिश्रले जानकारी दिए । रिसोर्टमा रहेको हिपहिप हुर्रे सेवाअन्तर्गत विश्वस्तरीय फन पार्क रहेको छ । जहाँ विभिन्न जलक्रिडा र स्थलक्रिडा गर्नसकिने मिश्रले बताए ।
यसैगरी चट्कारे सेवाअन्तर्गत विश्वस्तरीय विभिन्न परिकारहरु उपलब्ध रहेको छ । यसैगरी ३० हजार वर्ग फुटमा फैलिएको द व्हाईट कासल सेवा छ । जहाँ सानो र ठूलो गोष्ठी, सेमिनार, बैठक तथा जन्मोत्सव, बर्षगाँठ र शुभ–विवाह जस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।
रिसोर्टभित्र रेष्टुरेन्ट एवं बार सेवासमेत रहेको छ । रिसोर्ट प्रत्येक दिन दिउँसो ३ बजेदेखि राती १० बजेसम्म सञ्चालन हुने सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक डा. ओमप्रकाश मिश्रले जानकारी दिए । १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिएको रिसोर्टमा शुरुवातमा १० प्रतिशत छुट सुविधा रहेको छ ।
प्रबन्ध निर्देशक मिश्रले करीब ३८ करोडको लागतमा फनपार्क निर्माण गरिएको जानकारी दिए । रिसोर्ट तथा फनपार्कमा अन्तिम चरणको निर्माण कार्य पनि चलिरहेको छ । उद्घाटनमा सहभागी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाले नेपालगञ्जलाई चिनाउन फनपार्क सहयोगी हुने बिश्वास ब्यक्त गरे । उद्घाटनमा विभिन्न क्षेत्रका अगुवालगायतको सहभागिता थियो ।